အလင်းကိုသင်မြင်နိုင်သလော ညာဘက်မှန်ဘီလူးဖြင့်သာ! | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » သငျသညျအလငျးကိုကြည့်ပါနိုင်သလား? မှန်ကန်စွာရွေးချယ်မှန်ဘီလူးနှင့်အတူသာလျှင်!
(အဆိုပါ Nimrud မှန်ဘီလူးခေါ်) Layard မှန်ဘီလူး
ရှာဖွေတွေ့ရှိအသက်အကြီးဆုံးအတုမှန်ဘီလူး, ဒါဝေး, အ Layard မှန်ဘီလူး (aka: "အဆိုပါ Nimrud မှန်ဘီလူး") ဖြစ်၏ က 1853 အတွက် AH Layard တွေ့နှင့် 3000 နှစ်ပေါင်းန်းကျင်ကို (Neo-အာရှုရိအင်ပါယာအတွက် 750BC-710BC ခန့်) အသက်ခံခဲ့ရသည်။ ထိုသို့ဖွင့် Kalhu ခေတ်သစ်ကာလ၌လတ်-ပိုင်ရဲ့တော်ဝင်နေထိုင်ရာမြို့ (၌တွေ့
မြောက်ကိုရီးယားအနောက်နန်းတော်အတွင်းအီရတ် Nimrud) ။ ယင်း၏ကိုရှာဖှတှေ့ကရှေးဟောင်းမှန်ဘီလူးအဖြစ်နှင့် / သို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့မီးကိုစတင်အသုံးပြုခဲ့သည် postulated ။ လောလောဆယ်ကဗြိတိန်ပြတိုက်များတွင်ပြသင်; အဆိုပါမှူးသို့သော်အဆိုပါရှေးဟောင်းပစ္စည်း Lanyards '' အကဲဖြတ်အကြောင်းကိုဒီတော့သေချာမဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ရိုးရိုးအလှဆင်အဖြစ်ရည်ရွယ်ခဲ့ကြပေမည်ဟုထင်၏။ ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘဲ, သို့သော်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသို့မဟုတ် is မယုံနိုင်လောက်အောင်ရေနံစိမ်းဆိုသော်ငြားတဲ့မှန်ဘီလူး။
သငျသညျအထက်တန်းကျောင်းသို့မဟုတ်ကောလိပ်အတွက်လက်တင်ခဲ့လျှင်သင်နှုတ်ကပတ်တော်ကို "မှန်ဘီလူး" "ပဲဟင်း" ကနေဆင်းသက်လာကြောင်းပြီးသားသဘောပေါက်ခဲ့ကြပေမည်
တစ်ဦးကတစ်ခုတည်းပဲဟင်း Bean ကိုကို (ခုံး protrusion မှတ်ချက်)
(ထို bean ကိုနှစ်ဆခုံးပုံသဏ္ဌာန်တစ်ခုဖြစ်သည်) ။ ရှေးဟောငျးဂရိ, ရောမနှင့်အီဂျစ်စာသားများအားလုံး "ကိုမီးရှို့မျက်မှန်" နှင့်မြွက် "မှန်ဘီလူး။ " (အလားအလာ) ဘာ၏ပထမဦးဆုံးစာဖြင့်ရေးသားဖော်ပြထားခြင်းတစ်မှန်ကန်သောမှန်ဘီလူးဧကရာဇ်နီရိုပိုင်။
အနှစ်တထောင်ကျော်ကရှေ့ကိုခုန်ကျနော်တို့ဏု, အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းများနှင့်မျက်မှန်၏အလယ်ခေတ်ဥရောပတွင်သက်သေအထောက်အထားများအများအပြားရှာဖွေပါ။ ရာစကားပြောသော: သင်တစ်ဦးမှန်ဘီလူး grinder သို့ကျဆင်းသွားခြင်းနှင့်မိမိကိုမိမိတစ်ဦးမျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သောဖန်ဆင်းတော်မူသောမျက်စိစမ်းသပ်အကြောင်းကြားခဲ့တာလဲ ဝမ်းနည်းပါတယ်, ငါရိုးရှင်းစွာမဟုတ်နိုင် မြင် ကြောင်းအဟောင်းကိုသစ်အယ်သီးမထမြောက်မရှိဘဲဤခေါင်းစဉ် thru တစ်လမ်း။ Corniness ကျေနပ်ကျနော်တို့ယခုရွှေ့နိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာမှန်ဘီလူးတွေနဲ့ထိုးဖောက်၏နောက်လှိုင်းသည်ထင်ရှားကြောင်း, သို့သော် 1733 သည်အထိမဟုတ်ခဲ့, Chester Moore ကခန်းမအင်္ဂလန်အတွက်ဝင်း achromatic မှန်ဘီလူးတီထွင်သောအခါပါပဲ။ သူ
(အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းမှာအသုံးပြုတဲ့) ပတေရု Dollond ရဲ့ apochromat မှန်ဘီလူး
ယောဟနျသ Dollond: လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောမျက်လုံးဆရာဝန်များက 1758 အတွက်မူပိုင်ခွင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိမြင်ဘူးသောဖြစ်ရပ်များတစ်ကွင်းဆက်မှဦးဆောင်ရသောသို့သော်ဖန်ဘာသာရပ်လိုက်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ 1763 အသုံးပြုပုံပတေရုသ Dollard (ယောဟန်၏သား) သူ apochromat ဟုခေါ်တွင်သောတီထွင်မှုတစ်ခုတိုးတက်မှုတီထွင်ခဲ့သည်။
ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်းအလငျး၌နောက်တစ်နေ့ကြီးမားသောအရာအလင်း၏ခေတ်သစ်သီအိုရီ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှိ၏ အတော်ကြာသိပ္ပံပညာရှင်များ, ဆေးသမား, ရူပဗေဒ, တီထွင်သူနှင့်ချာအဆိုပါစမ်းသပ်ချက်များနှင့်ထင်မြင်ချက်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်တယ်။ အများစုကအထူးသ, သောမတ်စ်လူငယ် (အင်္ဂလန်) & AJ Fresnel (ပြင်သစ်), အလင်း၏လှိုင်းသီအိုရီဖွံ့ဖြိုးဆဲ။ ဂျိမ်းစာရေး Maxwell (စကော့တလန်), 1864 အတွက်အလင်း၏လျှပ်စစ်သံလိုက်သီအိုရီနှင့်အတူတစ်ချိန်တည်း (ခန့် 1860 ရဲ့) ဝန်းကျင်အလွန်ပထမဦးဆုံးအရောင်ဓာတ်ပုံတွေမှာမိမိအလုပ်နဲ့လိုက်ပါသွား။ မက်စ် Planck (ဂျာမနီ) နှင့်သူ၏ ကွမ်တမ် 1900 အတွက်သီအိုရီအလင်းကိုရှင်းပြမ စ. , 1905 အတွက်အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း (နောက်ဆုံးမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု) နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖိုတွန်ဆောင်ခဲ့အလင်း၏ Planck ရဲ့ဖော်ပြချက်တိုးမြှင့်။
1.5inch Dual-Monopulse Gaussian စက္ခုဗေဒမှန်ဘီလူးများက Dehron.com
တိုးတက်လာ ကွမ်တမ် mechanics ရဲ့ 1935 အားဖြင့်အလင်းအကြောင်းအများကြီးရှင်းပြသည်။
အလင်းသီအိုရီအတွက်အလုပ်လုပ်နေအပေါငျးတို့သညျအလှနျတောက်ပလူတို့နှင့်အတူ, ကမျက်ကပ်မှန်နှင့်တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်သည်အခြားတောက်ပသောစိတ်၏ရှေ့တော်၌မဆုံးရှုံးဖို့အရေးကြီးတယ်။ သူ Carl Friedrich Gauss တစ်ဂျာမန်သင်္ချာပညာရှင်ခေတ်သစ်မှန်ဘီလူးတစ်ကြီးမြတ်သဘောတူညီချက်နှင့်ယင်း၏အသုံးပြုမှုများ၏နားလည်မှုလှူဒါန်းခဲ့သည်။ သူ၏ Dioptrische Untersuchungen Gaussian စက္ခုဗေဒနှင့်အတူပုံရိပ်ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏လက်သီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပါအဝင်အများကြီးကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးတယ်။
လာမယ့် 100 နှစ်ပေါင်းအနည်းဆုံး, သူ့အလုပ်သောင်မတင်ထိရောက်သောမှန်ဘီလူး, မျက်ကပ်မှန်ထဲမှာငါးအဓိက quirks (astigmatism, မေ့မြော, ပုံပျက်, Petzval လယ်ကွင်းအဖြစ်များတတ်သည်နှင့်အလင်းဆုံ) ၏အထူးသဖြင့်ရှင်းပြချက်ကိုလမ်းပြကူညီပေးခဲ့သည်။
သူတို့အားအသုံးအနှုန်းများမျက်စိ၏မျက်ကပ်မှန်ဖို့လျှောက်ထားခဲ့ကြစဉ်တွင်, သူတို့မှန်ဘီလူး၏လယ်ပြင်၌၎င်း, ဆက်ဆက်ဘာမှအတွက်အသုံးပြုကြသည်မျက်မှန်မှနေဆဲ (ဓါတ်ပုံ) ကင်မရာများကနေမှန်ဘီလူးလိုအပ်သည် - ဒစ်ဂျစ်တယ်ယနေ့အသုံးပြုသောမှန်ဘီလူးမှကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်တတ်၏ရာ လယ်ပြင်၌ထုတ်လွှင့်စခန်းများနှင့်အခြားပညာရှင်များအသုံးပြုသောဗီဒီယိုကင်မရာများ။
ကို Canon CN-E14.5-60mm T2.6 L ကို SP မှန်ဘီလူး
Unsurprisingly, ကို Canon မှန်ဘီလူးဌာနအတွက်ကမ်းလှမ်းရန်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ (PL တောင်ပေါ်မှာ OR EF တောင်ပေါ်မှာအတူ) အဆိုပါ CN-E14.5-60mm T2.6 L ကို SP ရာမှာပွိုအကျယ်ထောင့်လွှမ်းခြုံပေးသည်။ စူပါတစ်ဦး 4.1x zoom မှန်ဘီလူးနှင့်အတူ 35mm ပုံစံကြောင့်ဝီရိယစိုက်အများဆုံး optic output ကိုများအတွက်အင်ဂျင်နီယာရဲ့။ ကို Canon ပုံမှန် higher-အဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီသို့မဟုတ်ကျော်လွန်နေပြီဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးအစဉ်အမြဲအတူကျတှေ့မှလက်ထပ်တာဖြစ်ပါတယ် ကို Canon ထုတ်ကုန်; ထိန်းချုပ်မှုကွင်းကဒီမှန်ဘီလူးပေါ်နှင့်တစ်ခုညှိနှိုင်းမှုယန္တရားအသုံးပြုသူရဲ့ရုပ်ရှင်လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့်အနားကွပ်၏နောက်ကျောမှာ torque နှင့်အတူမှန်ကန်သောခုခံထိန်းသိမ်းရန်ကူညီပေးသည်။ ဤသည်အံ့မခန်း 4K မှန်ဘီလူးက၎င်း၏ချဲ့ပုံရိပ်တွေကိုသှေးကူညီပေးသည်ထားတဲ့ကြီးမားတဲ့ aspherical မှန်ဘီလူး-ဒြပ်စင်များနှင့် fluorite ရှိပါတယ်။ ကြောင့်လက်ရာမြောက်သောအင်ဂျင်နီယာရန်, သငျ့လျြောသောအာရုံသာအနည်းငယ်မျှသာအပြောင်းအလဲများကိုလိုအပ်သည်။ ကို aperture မြှေး setting တစ်ခုတကျိပ်တပါးသောဓါး stunningly ချွန်ထက်အာရုံစိုက်နိုင်ပါတယ်။
သေချာဘို့ hit နောက်ထပ် ကို Canon စူပါအတွက်ထိပ်တန်းပြိုင်ဘက် - ထို CN-E30-300mm (PL တောင်ပေါ်မှာ OR EF တောင်ပေါ်မှာအတူ) T2.95-3.7 L ကို SP ဖြစ်ပါသည် 35mm တုနှိုချဲ့ခြင်းနှင့် telephoto focal length နှင့်အတူ format နဲ့။ အတွက်လက်တွေ့ကျတဲ့ features တွေအတော်များများဟာ ကို Canon'' s ကို High-end မျက်ကပ်မှန်ဟာသူတို့ရဲ့ optical ထုတ်ကုန်အများစုသို့၎င်းတို့၏လမ်းကိုရှာဖွေ; ယခင်မှန်ဘီလူးနဲ့တူဒီလွန်းပင်ဆန့်ကျင်ဘက်အခြမ်းကနေအသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်း enable လုပ်ဖို့စောင်းနေသောမျက်နှာပြင်နှစ်ဖက်စလုံးအပေါ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအမှတ်အသားများရှိပါတယ်။ ကို Canon အင်ဂျင်နီယာများဖောက်သည်ရဲ့ယူ HD အလေးအနက်ထားမျှော်မှန်းချက်။ ဖန်ခွက်ကိုဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းဒီဇိုင်းကို marking အတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်-သွေးဆောင်အမှားအယွင်းများ rectifying, ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ကျုံ့များအတွက်အစားထိုးချေ။
Schneider-Kreuznach Group ၏ Cine-Xenar III ကို (ခြောက်၏သတ်မှတ်မည်) မှန်ဘီလူးသတ်မှတ်မည်
ထိပ်တန်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်မှန်ဘီလူး၏ရွေးချယ်ရေးဖို့ Schneider-Kreuznach Group ၏လကျအောကျခံအဆိုပါ Cine ဖြစ်ပါသည်-Xenar III ကိုချုပ်မှန်ဘီလူး (ခြောက်ယောက်အစု) ။ သူတို့ရဲ့ဂရုတစိုက်အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းကိုအထူးရုပ်ရှင်ပညာနှင့်ဗီဒီယိုကင်မရာများရဲ့အကောင်းဆုံးမှာပစ်မှတ်ထားဖြစ်ပါတယ်။ အစိုင်အခဲ, အကောင်းဆုံး telecentric optical ဒီဇိုင်းနှင့်တကွ, bokeh အကျိုးသက်ရောက်မှုအံ့ဩဘွယ်သောအခြင်းနှင့် Cine ဖြစ်ပါသည်-Xenar III ကို (သင်မှန်ဘီလူးတစ်အလွန်အမင်းကောင်းချီးလိုင်းအတွက်မျှော်လင့်ထားမယ်လို့ကဲ့သို့) အစာရှောင်သည် T-ရပ်တန့်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာလက်ရာမြောက်သောအရည်အသွေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလည်းအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်တတ်နိုင်ပါတယ်။
Sony က SCL PK6 / F ကို CineAlta 4K မှန်ဘီလူးကိရိယာအစုံ
Sony က'' s ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ High-end မှန်ဘီလူး lineup မှအလှူငွေ6မှန်ဘီလူး၏အခြား suite ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ SCLPK6 / F ကို CineAlta 4K မှန်ဘီလူးကိရိယာအစုံ 20mm / 25mm / ပါဝင်သည် 35mm / 50mm / 85mm နှင့် 135mm မျက်ကပ်မှန်။ အကောင်းဆုံးကတော့ပု Arri PL တောင်ပေါ်မှာစနစ်ဖြင့်ကင်မရာများမှကိုက်ညီခြင်း, မျက်ကပ်မှန်အပြည့်အဝ-သတ္တုဆောက်လုပ်ရေးနှင့်တစ် aspherical ဒြပ်စင်နှင့်အတူ 4K နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ T2 သဟဇာတဖြစ်ခြင်းအပြင်, တစ်ဦးချင်းစီတစ်ဦး 9-Blade မျက်ဝန်းရှိပါတယ်။ , Sharp ကသို့မဟုတ်အပျော့ Sony က သင့်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလက်ျာဘက်ရရှိသွားတဲ့။
အနီရောင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံသင့်ရဲ့ရုပ်ရှင်အသုံးပြုမှုအတွက်မှန်ဘီလူးတစ်ခုကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်ရှိပါတယ်။ အချို့သောအနီရောင်မှန်ဘီလူးအသုံးပြုသွားမည်ကြောင်းအချို့ကမကြာသေးခင်ကနှင့်လာမည့်ပြဇာတ်လက်ရာများပါဝင်သည်: အဆိုပါ Hobbit Trilogy, Annabelle, Avengers: Ultron, Ender ဂိမ်း, ပွန်ပေ, Elysium, အင်ပါယာ၏ 300 ထ & Transformers ၏အသက်: နာမတော် Extinction ၏ခေတ်ရုံ 10 ဇာတ်ကားတွေ။ အနီရောင်အခြားထိပ်တန်းမှန်ဘီလူးထုတ်လုပ်သူများအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုမနှင့်သူတို့တစ်တွေရဲ့ထိပ်အစက်အပြောက် secure ဖို့ကကောင်းစွာအလုံအလောက်မရှိပါဘူး။
Panavision ရဲ့ Primo ချုပ်မှန်ဘီလူးဂိမ်း changer ပါ၏ သူတို့ပင်အနည်းငယ်အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲ secure မှစီမံခန့်ခွဲပါတယ်။ ဒီစုဆောင်းမှုထိပ်တန်းကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းပစ္စည်းပစ္စယဖြစ်၏ သူတို့
Panavision ရဲ့ Primo ချုပ်မှန်ဘီလူး
ပင်အလင်းရောင်နှင့် primo မှန်ဘီလူးကို အသုံးပြု. သည်အခြားရုပ်ပုံများလုံးဝချောမွေ့စွာရောစပ်ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ Ghosting, ပုံပျက်နှင့်တောက်ပ veiling အလွယ်တကူ Primo ချုပ်မှန်ဘီလူး quelled နေကြသည်; သူတို့ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်ရုပ်ရှင်ကင်မရာများအတွက်စံပြဖြစ်ကြသည်။ focal length 10 ထံမှ 150 မီလီမီတာမှနေကြပါတယ်နှင့်ဤမျက်ကပ်မှန်မဆိုထိတွေ့မှု၏အပြည့်အဝရပ်တန့်ဖယ်ရှားသော 1.4x Primo တိုးချဲ့, နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်။ လက်ျာ primo မှန်ဘီလူးနှင့်သင့်လျော်သော setting များကိုအတူ, သင်ပင်မှန်ဘီလူး၏အရှေ့ဘက်မှသည်ထက်နည်း2လက်မမှာအာရုံစူးစိုက်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Primo ဂန္ထဝင်စီးရီး Panavision ရဲ့ချုပ်မှန်ဘီလူး၏ပိုပြီးဂန္ပျော့ (ချိန်ညှိပ္ပံတစ်စကေးနှင့်အတူ) အာရုံနဲ့ high-ဆနျ့ကငျြဘစွမ်းဆောင်ရည်အကြားလွယ်ကူသောရွေးချယ်ရေးခွင့်ပြုပါတယ်။ တသမတ်တည်းအာရုံစိုက်အနီး-နိုင်တဲ့ macro အရောင်နဲ့ utility ကိုအခြားချုပ်မှန်ဘီလူးနဲ့ပြီးပြည့်စုံသောပွဲစဉ်, လက်ျာအခြေအနေများအတွက်ဖြစ်နိုင်; တစ်ဦးချင်းစီကိုလည်းနောက်ဘက်ဂျယ် filter ကို (ပေါ်ဝက်အူ) လိုက်လျောညီထွေနိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားမျက်ကပ်မှန် 21 မီလီမီတာကနေ 125 မီလီမီတာအထိ။ Panavision ရဲ့အမွေဖန်ဒီဇိုင်းများ (တိုးတက်လာသော) ဒီထုတ်ကုန်လိုင်းအတွက် 21, 27, 35, 50 နှင့် 100 မီလီမီတာမှန်ဘီလူးကြေးဇူးအားဖွငျ့; အားလုံးငါး T1.9 မြန်နှုန်းမဘို့ရာခန့်ရှိပါသည်။ အရွယ်အစား 24, 30, 65, 85 နှင့် 125 မီလီမီတာနှင့်အ T1.7 သို့မဟုတ် T1.8 အမြန်နှုန်းနှင့်အတူ useable ဖြစ်ကြပြီးပျော့အာရုံစိုက်ဖို့ချွန်ထက်ကနေချိန်ညှိနိုင်ပါတယ် အတွင်း ရိုက်ချက်။ cam drive ကိုယန္တရားများအနီး-နိုင်တဲ့ macro အာရုံစိုက်နှင့်အတူ3ခွကေိုကျော်လွန်အရာရာအားလုံးကိုတိုးချဲ့အာရုံစိုက်။ အဆိုပါဂန္စီးရီး (IE ကိုပု2မီလီမီတာ, နှင့် 100 မီလီမီတာ) ၏ 125 အရှည်ဆုံးမျက်ကပ်မှန်ကိုလည်း linear bearing နည်းပညာကိုအသုံးချရန်။
ရှေးဟောငျးအီအာရှုရိအင်ပါယာမှခေတ်သစ်နေ့ရက်ကိုတဆင့်မျက်ကပ်မှန်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးနှင့်ငါတို့သည်ဤလောကကိုတွေ့မြင်ရသောလမ်းကိုအကူအညီပေးနေတာပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံပြပွဲနည်းပညာများထင်ရှားအဆင့်မြင့်သကဲ့သို့, မျက်ကပ်မှန် ပို. ပို. ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပုံရိပ်တွေနဲ့ပြိုင်ပွဲသောကြောင့်ဆက်လက်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ chronicling အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီခဲ့ကြပါပြီ။ အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းအတွက်မှန်ဘီလူးကောင်းကင်မှကျွန်တော်တို့ကိုကြယ်ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်, ငါတို့ကင်မရာများအတွက်မှန်ဘီလူးငါတို့ပရိသတ်ကိုကြှနျတျောတို့၏ကြယ်များဆောင်ကြဉ်းကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
NAB Show ပါတီများ - ၂၀၂၀ NAB Show Party နှင့်နောက်ပိုင်းနာရီများစာရင်း - မတ်လ 4, 2020
နဂါးမြက်ပင်မြက်ပင်ချိုင့်၌အစက်အပြောက် - ဖေဖေါ်ဝါရီလ 4, 2020
NAB: ဒါဟာအားလုံး Started ဘယ်လို ... - ဇန်နဝါရီလ 28, 2020
အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း မီးလောင်သောမျက်မှန် ကို Canon ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကင်မရာ Dollond မျက်လုံး မျက်မှန် ဂျိမ်းစာရေး Maxwell Layard မှန်ဘီလူး မှန်ဘီလူး မှန်ဘီလူး မက်စ် Planck စက္ခုဗေဒ Panasonic က ဖိုတွန် အနီရောငျ Sony က အဆိုပါ Nimrud မှန်ဘီလူး ဗီဒီယိုကင်မရာ Young က 2019-01-04
ယခင်: ကြေညာလိုက်သည် 2019 HPA Tech မှသီးသန့်အစီအစဉ်
နောက်တစ်ခု: စတီဖင်အာနိုးဂီတက CNN, Sony က Interactive မှ, PBS ပြီးတော့ CGTN ရန် Sonic တံဆိပ်တပ်ဘဝမှကယျတငျ
မီဒီယာ Post- ထုတ်လုပ်မှုအတွက်သစ်ကိုပုံမှန်အပေါ် Panel ကို
NewTek TriCaster® Mini 4K သည်ထုတ်လုပ်သူများအားနေရာဒေသများမှပရိသတ်များထံရောက်ရှိစေရန်မြေပြင်နည်းပညာဆော့ဝဲလ်အင်္ဂါရပ်များဖြင့်တိုးမြှင့်ထားသည်။
Sennheiser's 6000 Series သည်အသံလွှင့်ထုတ်လွှင့်သူများအတွက်အရည်အသွေးမြင့်အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းကိုကမ်းလှမ်းသည်
DekTec ၏ Quad 3G-SDI / ASI PCIe Card သည်ရုပ်သံလွှင့်သူများအတွက်ဗွီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုအားဖြည့်ပေးနိုင်သည်
Draco vario ultra HDMI 2.0 သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောဗွီဒီယိုဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုထုတ်လုပ်သည်
PSSI သည် American Idol Finale ၏ရှုပ်ထွေးသောဂီယာအင်ဂျင်နီယာများကိုအောင်မြင်စွာရရှိခဲ့သည်